Tolomoge u Turimaayo Nabad Diidka! – Rasaasa News
Sep 11, 2010 dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Beesha Tolomoge ayaa ka mid ah beelaha nabada jecel ee sida cad uga soo horjeedsaday, kooxda Jwxo-shiil, si wanaagsana u soo dhaweeyey ururada nabada qaatay ee ONLF iyo Somali Galbeed, oo iyagu go,aan ku gaadhay in ay qalinka ugu hiiliyaan ummada Somalida Ogadeeniya. Guurtida beesha ayaa ku kulmay Jijiga go,aana soo saaray.
Bayaankii ka soo baxay shirkii Beesha Tolomoge ee ka dhacay Xamda Hotel ee Magaalada Jigjiga Jigjiga, 10-Sep-2010 – Waxaa warbaahinta loo qaybiyey bayaankii ka soo baxay shirkii ay waxgaradka, siyaasiyiinta, aqonyahanka iyo xubno ka socoda qurbaha ee beesha Tolomoge ay ku yeesheen Xamda Hotel ee magaalada Jigjiga.
Bayaanka Ayaa u Qornaa Sidan:
Ka dib kolkii ay beesha Tolomoge ka baaraan dagtay xaalada guud iyo tan gaarka ah ee deegaanka iyo isbadalada cusub ee dhacay deegaanka waxay beeshu si wadajir ah, oo aan kala hadh lahayn, isula qaadatay qodobo dhowr ah, waxayna beeshu soo saartay bayaankan.
Anagoo ku hadlayna codka beesha Tolomoge oo isugu jirna: odoyaal, culima,udiin, dhalinyaro, aqoonyahano, masuuliyiin sare iyo qurbojoog waxaanu go’aaminay arimahan hoose;
Waxaanu taageero buuxda siinaysaa xukuumadda cusub ee Dawlad Deegaanka Soomaliyeed iyo maamulka cusub ee loo dhisay gobolka Godey.
Waxay beeshu isku raacday in ay si wadjir ah ula dagaalanto nabad-diidka islamarkaana ay cidhib goyso cid kasta oo isku dayda in ay khalkhal galiso nabadgalyada gobolka Godey.
Waxaa kale oo ay beeshu islaqaadatay in qoyskii lagu helo in uu taageerayo nabad-diidka in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado.
Waxay beeshu go’aamisay oo ay baaq u diraysaa dhammaan dadka u dhashay dawlad deegaanka Somalida gaar ahaana kuwa u dhashay gobolka Godey in ay dawlada gacan buuxda ku siiyaan sidii loo sugi lahaa nabad galyada isla markaana ay ka qeybqaataan horumarka gobolka.
Waxay beeshu ugu yeedhaysaa maalgaliyaasha u dhashay deegaanka gaar ahaan kuwa gobolka Godey inay maalgashadaan kana faa’iidaystaan kheyraadka dhulkooda hooyo si markaas kor loogu qaado nolosha guud ee shacabka deegaanka.
Waxaa farxad weyn noo ah in shirkani ay ka soo qeyb galeen ururada nabadda qaatay ee UWSLF iyo ONLF kuwaas oo ka soo jeeda beesha Tolomoge iyagoo taageero buuxda siiyay go’aamada shirka Beesha waxay isla qaadatay in la xoojiyo Golaha Guurtida lana dhaqan galiyo Xeerka Beesha oo uu hormuud ka yahay Ugaaska Beesha Tolomoge.
Beeshu waxay cambaareyn xoog leh u soo jeedinaysaa falalka waxshnimada ah ee ay nabad-diidku u geysteen shacabka makasta ah ee ay ugu geysteen goobaha kala ah: Biyocadde, Haarweyn, Carmaale iyo dhammaan falalaka foosha xun ee ay nabad-diidku kagaysteen gobolka Godey.
Waxay beeshu digniin kulul u soo jeedinaysaa in uusan nabad-diidku ku dagmin Deegaanka Beesha Tolomogge, waxayna beeshu ballan ku qaaday in Gobolka Godey ay ka nadiifin doonto nabad-diidka.
Waxaa bayaanka na soo gaadhsiiyey: Nabaddoon Sh. Muxyadiin Sheekh Maxamed.
Firxadka Kooxda Jwxo-shiil, oo Matooro Beero Lagu Waraabinayo Gubay